पुस्तान्तरणको मार्ग कोर्दै रुपान्तरित कांग्रेस | We Nepali
२०७८ पुष १० गते १०:५८
उता गत वर्षमात्र राजनीतिक जीवनबाट विश्राम लिएका मलेसियाका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ९६ वर्षीय महाथीर मोहम्मदले ९४ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुभयो । महाथीर मोहम्मद एक सामान्य राजनीतिकर्मी नभएर अहिलेको मलेसिया बनाउने व्यक्तिको नाम हो । त्यसबेला मेलेसिया र बाहिरी विश्वमा बहस नै भयो कि ९४ वर्षमा पनि किन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा जानुपर्यो ? राजनीतिमा उमेरको बहस यसैगरी समयसमयमा देश विशेषमा उठ्छ र हराउँछ ।
बुढापाकाको पार्टी भनिएको कांग्रेसमा युवापुस्ताको रुपान्तरणको बहस हिजो निकै चल्यो । यो पछिल्लो महाधिवेशनको परिणाम हेर्दा अब पार्टी लगभग युवाको पोल्टामा रुपान्तरित भएको देखिएको । त्यसैले अब यो बहस सुरु भएको छ–के युवावर्गको उपस्थिति मात्रले कांग्रेस रुपान्तरित हुन्छ ? या यो रुपान्तरणले अबको कांग्रसलाई पुस्तान्तरणसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ ? अथवा कांग्रेस या अरु कुनै पनि पार्टी या देशको निर्माण र रुपान्तरण युवाबाट मात्र सम्भव छ ? अथवा युवाको प्रतिनिधित्व मात्र पार्टीको जीवन या पुनर्जीवन हो ?
कुनै पनि पार्टीलाई जीवन्त राख्ने ‘अक्सिजन’ विचार हो । अनि त्यो विचारलाई क्रियाशील बनाएर जनजनमा पुर्याउन क्रियाशील नेतृत्वको आवश्यकता त पर्छ नै । विचार आफैँमा विचरण गर्ने वस्तु होइन । त्यसलाई चलायमान बनाउन चलायनमान हुनसक्ने नेतृत्व नै आवश्यक रहन्छ । त्यसैले युवाको उपस्थिति मात्र पार्टीकोे क्रियाशील जीवन होइन । ती युवाको क्रियाशीलताले विचार बोकोस् र पार्टीका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरीका स्वरुपमा रहने भ्रातृ सङ्गठन र समग्र कार्यकर्तासम्म त्यो विचार र कार्यक्रमलाई कुशलरुपमा लैजान सकुन् । पार्टीमा युवाको प्रतिनिधित्वको बहस जुनसुकै पार्टीमा हिजो पनि थियो । तर अहिले यो बहस कांग्रेसको नेतृत्वमा आएका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र अरु युवाको प्रतिनिधित्वले सतहमा ल्याएको मात्र हो ।
त्यसो त उहाँहरुको उपस्थितिलाई मात्र नभएर आजसम्मको क्रियाशीलता र विचारलाई नै आवश्यक ठानेर महाधिवेशनले उहाँहरुलाई चुनेको हो । तर पनि अबका उहाँहरुका कार्यक्रमले मात्र पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने हो । यसैले नै पार्टीमा पुस्तान्तरणको मार्ग कोर्ने हो । माथि प्रस्तुत दुई विदेशी पाका राजनीतिज्ञको दृष्टान्तबाट राजनीतिमा उमेरको बार त्यति आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । तर यी दृष्टान्तबाट पार्टीमा युवावर्गको आवश्यकतामाथि प्रश्न गर्नु यो आलेखको आशय भने होइन । बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्पका तुलनामा ४६ र ४७ वर्षमा राष्ट्रपति बनेका बिल क्लिन्टन र बाराक ओबामाका कार्यकाल राम्रो पक्कै थिए होलान् । अनि ९४ वर्षमा प्रधानमन्त्री हुँदाभन्दा सन् १९८० को दशकमा देशको कार्यकारी प्रमुख बनेर मलेसिया बनाएको महाथिर मोहम्मदको जाँगर पक्कै जोसिलै हुँदो हो । तर पनि वास्तविकता के हो भने उहाँहरुका फरक उमेरमा पनि उचित विचार बोकेकैले ती देश र कार्यकालले कोल्टे फेरेको भने पक्कै हो ।
कांग्रेसको भर्खरै सकिएको महाधिवेशनले यो दुवै सन्देश राम्रोसँग दिएको छ । किनभने कांग्रेसमा विचारका साथै परिपक्व र युवा उमेरलाई महाधिवेशनले नेतृत्वमा पुर्याइदिएको छ । पार्टीमा पाको उमेरका अनुभवी र परिपक्व शेरबहादुर देउवालाई मूल नेतृत्वमा पुर्याएको छ भने ठूलो सङ्ख्यामा युवा वर्गलाई पनि पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिसम्म पुर्याएको छ । यो हेर्दा लाग्छ समय समयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्ने गरेजस्तै ‘फ्युजन’ वास्तवमा कांग्रेस पार्टीभित्र भएको देखिएको छ । अर्कातर्फ पार्टीमा आफू निकटका एक सक्रिय र अनुभवी नेता डा प्रकाशशरण महतबाहेक सभापतिमा पुनःनिर्वाचित शेरबहादुर देउवालाई अपेक्षित नै परिणाम हात लागेको छ ।
नेकपा बनेको तीन वर्षमै अन्तरपार्टी विरोध उत्पन्न भयो । विरोधमा मात्र सीमित रहेन, यसले विग्रह र अन्ततः विभाजन नै निम्त्यायो । जसको रिस दुई पटकसम्म संसद्सामु पोखियो र विघटन गरियो । यद्यपि, दुवैपटक संसद्लाई पुनर्जीवन दिलाउने कार्यको नेतृत्व प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसितमा शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो ।
त्यसपछि नेकपाकै एक घटकको साथ र सहयोगमा देशले नयाँ सरकार पायो र त्यसको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो । यहाँ यो दृष्टान्त पेश गर्नुका कारण के हो भने नेकपा, मधेसी र अरु पार्टीमा पनि यसबीचमा टुटफुट आयो तर कांग्रेस भने एकतावद्ध रह्यो । यसको अर्थ कांग्रेसमा अन्तरपार्टी कलह नरहेको भने होइन । पार्टीभित्र साठी चालिसको घेरा तेह्रौँ महाधिवेशनदेखि नै कोरिएको थियो र यसले अन्तरपार्टी कलह बढाएकै थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाका काँधमा सभापतिका रुपमा पार्टी हाँक्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ, देशको विशिष्ठ राजनीतिक परिवेशको निकासमा पनि उहाँको कुशलता अझै आवश्यक छ । झण्डै दुई तिहाइको नेकपाको सरकारले देशलाई निकास दिन नसकेपछि यो विशिष्ठ परिस्थितिमा बनेको सरकारको नेतृत्व अहिले उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ । अब स्थानीयदेखि सङ्घीय संसद्सम्मको निर्वाचन गर्नु पर्नेछ । पक्कै पनि निर्वाचन भनेको चुनौतीपूर्ण काम हो नै । त्यसमा पनि स्थानीय तहदेखि प्रदेश संसद् हुँदै सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गर्नु पर्नेछ । ती काम सन्निकटमै रहेकाले अब सरकारले गृहकार्य थाल्नुपर्ने अवस्था छ ।